बाफिएर रोयो हिमाल – Kanak Mani Dixit
हिमाल खबरपत्रिका (६-१२ साउन, २०७५) बाट
अन्यत्र भन्दा हाम्रोमा राज्य/सरकारसँगको सान्निध्यताले गर्दा राम्रो हुँदा नागरिक हौसिन्छन्, नराम्रो हुँदा विरक्तिन्छन् ।
राजेश केसी (‘फलानो’) ले गएको हप्ता सामाजिक सञ्जाल माध्यमबाट नारायणगोपालको स्वर रहेको ‘साउनको झरी बनी तिमी आऊ न’ बोलको गीत गाए ।
दीपक जंगमको शब्द र नारायणगोपालको गायन पहिल्यैदेखि मनपर्ने, त्यसमाथि यी शब्द–
“बाफिएर आज हिमाल, किन रोएछ
कता कता मनभित्र घाउ दुखेछ ।”
अनायास आँखा रसाए, बोली अड्कियो । बिरामी परेर घरै बसेकोले अलि घोत्लिने मौका मिल्यो– किन दुख्यो यसरी मन ?
शारीरिक कमजोरीको कारण मात्र त होइन । मेरो चिन्तन नागरिक र राज्य, ढुंगा र माटोसँगको सम्बन्धतर्फ मोडियो ।
दक्षिणएशियाका मुलुकमध्ये नेपाल सबैभन्दा पुरानो ‘नेशन् स्टेट’ हो, अढाइ सय वर्षअघिको एकीकरणदेखि यो छँदैछ ।
अनेकन् सामाजिक विकृति र निरन्तर सामुदायिक बहिष्करणका बाबजूद एउटै मुलुकसँग २०औं पुस्ताको सम्पर्क रह्यो, एउटा भावना जाग्यो, जसलाई राष्ट्रियता पनि नभनौं, न त राष्ट्रवाद ।
यस अवधिमा एउटा सांस्कृतिक पहिचानको डोरोले बाँध्यो, नागरिक–नागरिक र नागरिक–राज्यबीच, जबकि त्यो पातलो डोरो सुषुप्त रुपमै रहिरह्यो । आज राष्ट्र–राज्यको युगमा त्यो सांस्कृतिक पहिचानले अलि मूर्तरुप लिंदैछ ।
संसार उपनिवेशकालबाट स्वतन्त्रताको युगमा प्रवेश गर्दा राज्य र राष्ट्रको उपस्थिति टड्कारो हुनपुग्यो र यो ‘ट्रेन्ड’ बाट नेपाल अलग रहेन ।
तर पनि नेपालीको ‘राष्ट्रियता’ छिमेकका दक्षिण एशियाली मुलुक भन्दा अलि फरक छ जस्तो लाग्छ– यस कारण पनि कि हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान धेरै अघिको हो भने छिमेकमा ७० वर्षयता मात्र राष्ट्र–राज्य बन्न पुगे (भारत–पाकिस्तान सन् १९४७, श्रीलंका सन् १९४८, बाङ्लादेश सन् १९७१)।
तर भावनाले मात्र आजको राष्ट्रिय पहिचानलाई थेग्न सक्दैन, नागरिकले राज्यबाट सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सुशासन, अन्तरसामुदायिक सुसम्बन्ध आदिमा पनि आस राखेका हुन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हावापानी, भूगोल र मानव ‘डेमोग्राफी’ ले गर्दा यहाँको समाजलाई जीवनयापनको उँचाइ ताक्ने क्षमता दिलाउँछ । भन्नुको मतलब, नागरिकले देश र राज्यबाट आस गर्ने मनग्गे ठाउँ छ, गर्छन् ।
इतिहासका तन्तु र सम्भावनाका पुरियाहरूले मात्र पनि देशसँग नागरिकलाई बाँध्ने पूर्वाधार बनाउँदैन ।
आम नागरिकमा मुलुकको दिशा, समाजको गति, राजनीतिक धरातल फेरबदल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ । किनकि राज्य सञ्चालनमा जनताको पहुँच पुगेको छैन भन्ने सही विचार पनि हामीसामु छ, तर दक्षिणएशियाको कुनै पनि क्षेत्र र उप–क्षेत्रका जनताभन्दा नेपालीमा ‘म पनि आन्दोलन र अभियानमा सहभागी भई केही गर्न, केही रोक्न र केही बनाउन सक्छु’ भन्ने विश्वास पलाएको देखिन्छ ।
आम नागरिकले आफ्नो क्रियाशीलता जगाइरहेका पनि छन् । राज्यको ढाँचा बदल्न जनआन्दोलन गर्छन्, तथाकथित ‘जनयुद्ध’ लाई अस्वीकार गरेरै गलाउँछन्, ज्ञानेन्द्रको असोजतन्त्र लत्याउँछन्, भारतीय नाकाबन्दीलाई जरैदेखि उखेलिदिन्छन्– यत्तिका सफलताहरू जनताको ‘केही गरिछाड्छु’ भन्ने अठोटमा आधारित छन् ।
यसरी राष्ट्रिय ‘न्यारेटेभ्’ लाई हाँक्न सक्ने प्रमाणित क्षमता भएका कारण नेपालका नागरिकमा केही राम्रो भइहाल्दा खुशीको सीमा रहँदैन, केही अनिष्ट आइलाग्दा सबैको मन भारी हुन्छ ।
आफ्नो ‘एजेन्सी’ नभएको समाजमा नागरिक बढी भाग्यवादी हुन्छन् र कुनै पनि उतारचढावले उनीहरुलाई छुँदैन । नेपालीलाई भने एक एक उतार र चढावले छुन्छ, हँसाउँछ र रुवाउँछ ।
यही कारण हुनुपर्दछ, ‘बाफिएर आज हिमाल किन रोएछ’ हरफ सुन्दै गर्दा गलामा गाँठो परेको । आज द्वन्द्वकाल, ज्ञानेन्द्र क्षण, संक्रमण अवधि, नाकाबन्दी पार गर्दै संविधान लेखिंदा र तीन–तीन सरकारको निर्वाचन भइसक्दा नेपाल वास्तवमा स्थायित्व तथा समृद्धिको सँघारमा उभिएको छ भन्ने आस होइन अठोट सबैमा थियो ।
तर स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय सरकार हाँक्नेहरूको तरिका र रवैया हेर्दा लागिपरेका जनताको आस फेरि एकपटक खेर जाने पो हो कि !
अकर्मण्यताले अराजकता निम्त्याउँछ, जसले अवसरवादको बाटो खोलिदिन्छ । उपलब्धि हातैबाट गुम्न आँटेको देखेर आज मुलुकभर दशौं लाख गला अवरुद्ध छन् ।